Mawduucyada Adam Small ee Martech Zone |
Maqaallada by Adam Yar
Khamiista, Diseembar 15, 2016 Jimco, Febraayo 10, 2017 Adam Yar
Halkan waxaa ku yaal xoogaa shaqo-guri ah intaadan xitaa aqrin tan. Maxay tahay boqolkiiba wax ka beddelkaaga ka dhaca moobilka iyo desktop-ka? Google Analytics, dooro Beddelka> Yoolalka> Beddelka oo xulo taraafikada moobiilka ee kooxdaada koowaad iyo taraafikada aan-ahayn ee labaad: Waa maxay boqolleydaada taraafikada ee ka dhaca moobaylka iyo desktop-ka? Google Analytics, dooro Dhageystayaasha> Aragtida guud dooro taraafikada mobilada ee kooxdaada koowaad iyo taraafikada aan-moobilka ahayn tan labaad: Tusaalaha waxaan ahay
Khamiista, Sebtember 22, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Adam Yar
Shirkadaha ayaa lacag aad u fara badan ku bixinaya horumarinta barnaamijka mobilada. Meel kasta oo ay saamiyadu sareyso, khiyaanada ayaa u muuqata inay raacayso. Sida laga soo xigtay warbixin cusub oo ka timid DeviceRank, Mobile App rakibaadda iyo khiyaanada hawlgelinta waxay ku kici doontaa xayeysiiyayaasha illaa $ 350 milyan sannadka 2016 AppsFlyer State of Mobile App rakibidda & Ka-shaqeynta Khayaanada waxay ku saleysan tahay teknoolojiyada shirkadda DeviceRank - - xalka ugu horreeya ee ka hortagga musuqmaasuqa ee warshadaha si loo aqoonsado iyo ka saar khayaanada heerka qalabka - oo daboolaya 500 milyan
Talaado, Agoosto 30, 2016 Isniin, Janaayo 16, 2017 Adam Yar
In kasta oo kanaalada kale ay sii wadaan inay noqdaan kuwo caan ah, haddana waxaa jira hal kanaal isgaarsiineed oo sii wada inay si muuqata uga sii fiicnaato kanaal kasta markay tahay wadista taraafikada tafaariiqda, deeqaha aan macaash doonka ahayn, iyo ka-qaybgalka degdegga ah. Kanaalkaasi wuxuu farriin qoraal ah oo moobayl ah ugu dirayaa SMS. Istaatistikada Suuqgeynta SMS Fariimaha qoraalka ah ee loo soo diro SMS waxay leeyihiin aqrin 98% 9 10kii fariimood ee qoraalka ah waxaa lagu furaa 3 ilbidhiqsi gudahood markii la helo 29% dadka lala beegsaday SMS-ka-gaabis
Markii aan dhignay Agent Sauce oo isku daraya boggaga, isdhexgalka IDX, dalxiisyada, socdaalada wareega, booqashooyinka fiidiyowga, suuqgeynta iimaylka, farriinta SMS iyo daabacaadda, waxaan ogaanay in suuqgeynta waxyaabaha ay fure u tahay wadista iibsiyo badan wakiilada. Iyo, maaha wax la yaab leh, wakiilladayada ka faa'iideysanaya barxadda waxay si buuxda u arkaan jawaabta ugu weyn iyo heerarka dhow. Suuq geynta ma aha kaliya erey ama hadal aan caddayn, istiraatiijiyad suuq geyn tijaabo ah: runti way shaqeysaa. Xaqiiqdii, suuq-geynta waxyaabaha la soo saaray ayaa la muujiyay inay soo saaraan qiyaastii
Maalin Nolosha Internetka
Tuesday, May 7, 2013 Adam Yar
2.4 bilyan oo isticmaaleyaasha internet-ka adduunka oo dhan 70% ka mid ah ayaa maalin kasta isticmaala internetka. Taasi waa 37.3% dadka adduunka… waa koror ah 566% tan iyo sanadkii 2000. Tirada aaladaha mobilada ee lagu isticmaalo internetka ayaa labanlaabmay, iyadoo 38% isdhexgalka warbaahinta maalin kasta lagu sameeyo taleefannada casriga ah. 139,000 websaydh cusub ayaa nool oo 144 bilyan oo emayl ayaa la diraa .68.8 88% ee emayllada ayaa ah spam! Google wali waxay ku badantahay suuqa raadinta XNUMX%